NY HERIN’NY FANAHY NA NY HASINA · L'Homme, son aura et son évolution
> NY HERIN’NY FANAHY NA NY HASINA
Classé dans : — cyrius @ 10:11
Ny hasina sy ny baiboly, herim-panahy ny hasina, miaro ny hasina, avy min’iza ny hasina ? Ny manan-kasina, manan-kozaraina, ny rà no ifandovana fa tsy ny hasina, ireo olona manan-kasina, ireo sata ara-kolontsaina tsy nisy teto imerina.
NY HASINA SY NY BAIBOLY
HOSANA, hoy ny jiosy raha miantso vonjy, hosana izay tsy hafa fa dikan’ny teny hoe hasina.
Hosana, azo alàna ny -na raha handika teny masina hebreo amin’ny teny malagasy.
Hosa no hitanao avy eo.
Ny renisoratra ihany nefa no tena mitondra ny dikanteny, azo soloia ny zanatsoratra, fa tsy miova ny heviny.
HS no renisoratra tavela eo, solointsika ny zanatsoratra
hitanao avy ny tena hoe hasy, hasina.
Moana koa nefa ny H- ka azo alana,
Lasa -S- sisa ilay HS teo, litera sin hebreo.
Sin, izay milaza hery, herim-panahy izany ny hasina
Raha arahinao ireo misy ifamatorany amin’ny mesia ny hasina, satria hasina, matoanteny niavian’ny masina na masy na mesia.
Miantso mpamonjy izy, Mesia moa ny mpamonjy na vosahosotr’Andriamanitra.
Dikanteny avy amin’ny hebreo sy ejipsiana io, avy amin’ny litera telo mhs, izay moana ny h ka azo atao koa hoe ms.
Ny renintsoratra moa no tena mitondra ny dikanteny fa tsy manova ny dikany ny zanatsoratra.
moss, mosse, anaran’i mosesy – Mesia, mahasiah, mpitondra hazavana, mpamonjy, mitovy amin’ny dikan’iretsy roa voalohany ihany.
Genie laharana faha-5 amin’ireo ataon’ny ésotériste hoe 72 génie. Masina ihany koa ny dikany amin’ny teny malagasy, masy, masih, hoy ny arabo.
Jereo fa misy fifandraisana ny hoe mesia sy ny hosana.
Ny iray mpamonjy, ny iray miantso ny mpamonjy.
Ny hasin’ny Mesia, na herin’ny fanahin’ny mesia izany no antsoina hamonjy raha miantso hoe hosana.
Eto no mipetraka ilay hoe « Ny hery tsy mahaleo ny fanahy».
Hery tsy hita ny hasina, fa tsapa ny heriny.
Hery ateraky ny hazavan’ny fanahy.
Samy manana ny heriny io ho an’ny tsirairay fa tsy mitovy.
Arak’izany Andriamanitra no mazava indrindra, izy no manana ny hasina ambony indrindra.
Izy koa no mahery indrindra noho izany.
Aura, hazavana, na fanahy raha adika amin’ny fiteny Malagasy, ary ny herin’io hazavana io no atao hoe Hasina.
Hasina aloha, vao fahefana (hery miafina), fa tsy ny mifamadika amin’izany.
MIARO NY HASINA
Toy ny asan’ny atmosphere izay miaro ny tany sy ny mponina ao aminy @ taratra manimba avy @ masoandro, ny hasina, sady miaro @ hery hafa ivelan’ny tenantsika (attaque extérieur).
Ahafahana miaro ny hafa izy, ahafahana miaro ny firenena ihany koa.
fa « Ny fahamarinana, manandratra ny firenena ».
Ny hasina, tsy inona fa herim-panahy, raha adika tsotra, ny hasina no hery ampiasain’ny fanahy hahavitany an’ireo voalaza eo ambony ireo.
Tsy gaga iska raha saro-piaro amin’ny hasiny ny Razantsika teo aloha.
Io Hasina io ihany koa no ampiasin’ny mpitondra fahiny sy ny olom-boafidin’Andriamanitra ao amin’ny Baiboly toa an-dry Davida sy Mosesy hiarovana ny taniny sy ny vahoakany.
Ny hasina araka izany, tsy avy amin’ny ra fa avy amin’ny Fanahy,
Izany hoe, izay manam-panahy no manana ny Hasina.
Nihena ny herin’i Saoly ohatra, rehefa tsy nanaraka intsony ny baikon’Andriamanitra.
Nahazo hery mihoatra ny tanjany ara-batana kosa i Davida, ary afaka namonjy ny vahoakany tamin’ny Pesta sy niaro azy tamin’ny fahavalo manodidina, noho ny fananany Hasina, ka nahafahany nifandray nampiasa an’ilay herin’Andriamanitra ao aminy.
Voaaro kokoa ny vahoaka raha entin’ny olona manam-panahy, izany hoe olona manan-kasina, to an-dry Davida.
Ity Hasina ity ilay fahefana voalaza ao amin’ny Eklesiastika 17 : 3 manao hoe : « Nomeny FAHEFANA arak’izay heriny avy izy ».
Ny fahazavan’ny fanahy kosa no hery voalaza eto.
Raha ampitoviana amin’ny hazavana hita maso isan’andro, izany, raha ny hazavan’ny jiro, izay samy mazava daholo no fanahy, dia ny tanjany na ny « puissance »- ny no mampiavaka an’ireo, dia toy izany koa ny Hasina ananany.
Izany hoe tsy mitovy ny asa vitany.
Izany hoe miankina amin’ny fahazavan’ny fanahiny, ny hery sy fahefan’ny tsirairay na hasina fa tsy miankina amin’ny ra, tsy miankina amin’ny rainao na ny reninao na ny tantaran-drazanao.
AVY AMIN’IZA NY HASINA ?
Avy amin’Andriamanitra sy avy aminao ny hasinao
Misy mihevitra fa avy amin’olombelona ny hasina, fiteny ohatra ny hoe tsy manome hasina na manome hasina.
Tsy hasina nefa no tianao holazaina eto fa haja, hajainao, na tsy hajainao ilay olona.
Tsy mampihena na mampitombo ny hasin’ny olona iray ny fanajana sy ny tsy fanajanao azy.
Hery afaka miaro anao nefa ny hasin’ny olona manam-panahy.
Toy ny masoandro nefa io, tsy miangatra, mahazo ny hazavany avokoa ny rehetra.
Safidinao ny hialoka amin’ny zavatra maloka na hihiboka ao amin’ny maizina mba tsy hahazo an’ilay hazavana sy hafanana entiny,
Na hanararaotra an’ilay hazavana sy hafanana.
Fa tsy manana fahefana hampihena na hampitombo an’io ianao.
Raha tsy hainao na tsy tianao ny manaja, satria tsy ampy fahendrena ianao, tsy mazava saina ianao, tsy ampy ilay fahzavana ao anatinao sy ny heriny. Tsy dia manan-kasina loatra ianao izany.
Izany hoe tsy manana fahefana amin’ny hafa ianao fa miankina amin’ny hasina ny fahefana.
Tsy afaka hampitombo ny hasin’ny hafa koa ianao arak’izany, satria tsy manana hozaraina.
Ny manan-kasina kosa, mana-kozaraina
Izany no mahatonga ny olona mitady fanampiana amin’ny olona manan-kasina toy an’ireo mpisorona ao amin’ny baiboly na ireo ombiasy, hirary azy manao hoe : « Masìna ianao… », izany hoe mitomboa hasina ianao.
Hita ao amin’ny tantara koa ny firariana ataon’ny mpanjaka rehefa amin’ny andron’ny alahamady be, na fiandohan’ny volana alahamady (bélier), manao hoe : « Hitombo hasina anie aho, Andriamanitra, Andriananahary ».
Rabiby (Habib) ohatra tsy taranak’andriana, fa hovalahy, vahiny, fa nanam-pahendrena, nanam-pahaizana tamin’ny fanandroana ny anao lahy.
Nampiaiky volana ny ambanilanitra ny fahaizany sy ny fahendreny.
Izy hatrany no mahita ny volana voalohany, fantatra avy amin’ny kajy mialoha io.
Fantantsika ohatra ity oha-pitenenana ity : « Mahita ny volana alohan’i Habib », izay niofo ka lasa hoe : « Mahita ny volana alohan’ny biby »,
Olona mpandainga no tondroina amin’io, izany hoe i Habib, na Rabiby ihany no tena mahay, mahita ny volana mialoha.
Ombiasy, na olona be hasy, be hasina no ilazana an’ireny olona ireny.
Azo ialokalofana moa ny hasina.
Mba hanamafy an’izany, nangatahin’ny vahoakan’Amohidrabiby ho mpanjaka Rabiby, ka izay no nahatonga azy ho mpanjakan’Ambohidrabiby.
NY RÀ NO IFANDOVANA FA TSY NY HASINA
Tsy avy amin’ny rà ny hasina noho izany ary tsy lova avy amin’ny razana, ny ra izay aty amin’ny lentam-pivoarana ambany indrindra amin’ny maha-olona, ny fanahy moa no maha-olona, ka ny double étherique na vatana aina, izay mbola itovizantsika amin’ny biby no mifandray amin’ny rà, ka tsy azo ireharehana velively.
Mena ny ran’ny biby, mena ny ran’olombelona, izay manana rà tsy mena no asa.
Tsy misy fiamboniana noho izany ao amin’ny rà.
Porofon’izany, tsy ny zanak’i Saoly no notendren’Andriamanitra hanjaka handimby azy fa i Davida.
Tsy taranak’andriana koa ingahy Rabiby mpanjakan’Ambohitrabiby, fa ny hasiny, izany hoe ny fahendreny ny herim-panahiny no nilain’ny vahoaka hiaro azy, ka nangatahiny ho mpanjakany izy.
Porofo fahatelo tsy ny rà no maha andriana, fa ny fanahy, hoy indrindra i hagamainty manondro an’ireo mpanjaka, nitondra teo aloha, tamin’Andrianampoinimerina : «Taloha, nanjaka hova ny tany».
Teny nataon’i hagamainty tamin’Andrianampoinimerina koa ny hoe : « Raha tsy amin’ny manjaka hova ka hakan’ialahy hetra avokoa, manomboka amin’ny mangahazo noho miakatra, ka hatramin’ny andevo noho midina …». Izany hoe mpanjaka mihinam-bahoaka, tsy manan-kasina, mitovy lanja amin’ny olona rehetra ihany, hova izany fa tsy andriana.
Ny fanahy izany no mitondra ny hasina, fa tsy ny fahefanao na ny fahefan’ny rainao aman-drazanao.
Izany hoe tsy nanam-panahy ireo andriana teo alohan’Andrianampoinimerina, nanjakazaka tokoa ireo tamin’ny vahoaka.
Tsy fanahin’andriana izany, olona tsy manam-panahy, tsy manan-kasina, tsy miaro fa manimba, ka nahavaky vava ny vahoaka nanao hoe : « Saika tsy nanana omby am-pahitra isika ».
Mpisoloky izany izay rehetra misora-tena ho andriana, ankoatry ny mesia voatendrin’Andriamanitra, sa hosedraintsika ?
Fomba fanaon’Iladama mihitsy io, ary manana sedra azo ampanaovina azy ireo tsara isika.
Mila fanitsiana, noho izany ny fitantarana sy ny régie ataon’ny mpanao gazety , izay tompon’ny fanadihadiana, alohan’ny fampitàna.
Anisany ireto manaraka ireto.
IREO OLONA MANAN-KASINA
Raha mbola manam-panahy aloha ianao, manan-kasina izany.
Tsy mitovy nefa ny hasin’ny tsirairay,
Ao ny mana-kery entina hitsabo,
Ao ny manan-kery hamantatra ny lasa sy ny ho avy?
Ao ny mpamantatra ny zava-miafina sy nafenina, sns.
Fa ny Manan-kasina tiana holazaina manokana eto, araky ny voalaza etsy ambony, dia ireto.
Ny olom-boafidin’Andriamanitra no nataon’Andriamanitra ho lahimatoa, izy no manana ny hasina ambony indrindra.
Tsy voafetra ny hery azony entina hamonjena ny firenena, izay no maha-mpamonjy azy.
Manana fahefana koa izy hibaikoana ny herin’ny natiora, na rivo-doza io, na volkano, na horohoron-tany, na zavatra hafa.
Ny mesia no tiana ambara eto, ny mpanjaka mpisorona, izay tsy iza fa ilay mpanjaka mpisoron’Israely fahiny, i Davida mpanjaka ihany no niverina. Izy aho.
Raha ny baiboly mantsy no jerena, dia ireo mpisorona no oanisan’ny olona manan-kasina voalohany tany.
Ny mpanjaka no faharoa, izay ahitsin’ireo mpisorona raha diso.
Ialohavan’ny teny hoe MasÌna ianao, ny resaka atao aminy.
Teto kosa, teo ny ombiasy, toa an-dry Ranakombe, ao amin’ny angano. Misy ifandraisany amin’ny tantaran-dry zareo jiosy ity Ranakombe ity, satria i Arona ihany rehefa alalinina.
Teo koa ny mpanandro hafa toa an-dry Rabiby, Sy ireo mpanandro sy mpanao hatsarana fahiny ; ireo mpitana sampy izay tsy misy intsony moa satria novonoin-dRanavalona II ary nodorany ny sampiny, mpisoloky sisa, mpanjana-tsaina raha misy mipoitra.
teo ihany koa ireo andriana nanjaka sasany, toa an’Andrianampoinimerina.
Tsy ny mpanjaka rehetra nefa no nanan-kasina, satria nanjaka hova ny tany, andriana nihinam-bahoaka no maro teto, afa-tsy Andrianampoinimerina.
Teny foana sisa nefa ny hoe hasina fa fanajana vokatry ny tahotra no nomen’ny vahoaka azy ireny.
« Akoho miarahaba voay e, tsy fanajana fa tahotra ».
IREO SATA ARA-KOLONTSAINA TSY NISY TETO IMERINA
Tsy nisy mpitondra ara-drazana teto amin’ny faritanin’Antananarivo, hatramin’ny fanjanahantany no mankaty.
Tsy nisy teto anivon-tany sy teto madagasikara ny statut toy ny hoe : mpitana hasina, satria tsy zavatra tazonina ny hasina.
Tsynisy ary tsy misy eto Imerina koa ny atao hoe ampanjaka, taorian’ny nionganan’ny fitondrana mpanjaka, ary tsy nanangana isika satria kolontsaina tsy nisy teto koa izany.
Tsy nisy teto koa ny tangalamena.
Mpandalina fomban-drazana ihany no misy. Anisany ny tenako, ary olona manana ny hasiko manokana koa nefa, fa tsy lova moa izy ity.
Ireo ampanjaka tany amin’ny faritra ivelan’ny faritanin’Antananarivo ihany moa no naverina tamin’ny toerany, na tsy nokitihin’ny frantsay tamin’ny toerany.
Tsy toy izany ny teto, ary Andrianampoinimerina, izay tsy niteraka no fara-andriana, araka ny voalaza momba ny tantarany.
Tsy nisy teto amin’ny faritanin’Antananarivo koe ny hoe mpiandry tranobe, toy ny amin’ny faritra.
« Sécurités sy gardiens » no mpiandry tranobe sy tranokely aty, niandry ny tranon’olon-tsotra, miandry orinasa sy tranobe toy ny Carlton, niandry ny rovan’i Manjakamiadana koa, ary niditra am-ponja rehefa may ny rova.
Mazava ho azy, misy ny ratsy tarehy mangata-bady ka anaran-dRay no entina, anaran-dRain’olona aza ny an’ny sasany.
Rehefa nasain’i Cyrius, ny tenako, nitony izy, tampoka tokoa ny fivoahany, ary nahita lalam-poza handehanana any Antsirabe, ary nandeha haingana namonjy ny morondranomasina nony avy eo, ary lasa, tsy nimpody.
Tsaroantsika tsara ilay horohorontany tamin’ny 2017.
Matetika , rehefa avy ny orana, angatahiko izy hitsahatra rehefa maika aho, ary lazaiko aminy tokoa fa Zanak’Andriamanitra aho, mitsahatra izy avy eo, na avy fa tsy eny amin’ny lalana alehako. Fanaoko izany teo anelanelan’ny 2010 sy 2012.
Ataoko, fa voahitsin’ireo, izay mieritreritre zavatra tsy mifanaraka amin’izay voatendrin’Andriamanitra, ho an’izay hikiribiby, moa, ..
Kolontsaina vahiny nogasina kosa ity sarimiaina noforoniko ity ary misy feo sy mozika :
Ireo boribory manodidina ny vatana ireo no atao hoe fanahy 7 mahafehy trano. Tsy hita izy satria tsy hitanao koa ny tontolo iriariavanao.
Tsapa sy re kosa izy.
Trou noir io mainty be io manodidina azy io